Mid ka mid ah Musharaxiinta Madaxweyne oo ku dhawaaqay inuu tanaasulay – STAR FM SOMALIA
Mid ka mid ah Musharaxiinta Madaxweyne oo ku dhawaaqay inuu tanaasulay
C/llaahi Cali Xasan oo ka mid ahaa 24-kii Musharax ee is diiwaan geliyay ayaa goor dhow oo saaka ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay Musharaxnimada xilka Madaxweynaha.
Musharaxan oo horay ugu guuldareystay tartankii Xildhibaanada Aqalka Hoose ee ka dhacday Cadaado ayaa ka mid ahaa 8- Musharax oo maanta khudbado ka jeedin lahaa Baarlamaanka.
Eng. C/llaahi Cali Xasan oo ku heyb ahaa Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sababaha uu uga tanaasulay Musharaxnimada Madaxweynaha u cuskaday dhowr arrimood.
Halkan hoose ka akhriso War saxaafadeed uu soo saaray Musharaxan:-
Anigoo ah Eng. Cabdullaahi Cali Xasan waxaan Go’aan ku gaaray in aan ka tanaasulo u tartanka jagada Madaxweynimo ee Soomaaliya maanta oo taariikhdu tahay 04.02.2017, tanaaulkeyga musharaxnimada Madaxweynaha wuxuu ku saleysanyahay sababaha hoos ku qoran:
Sidoo kale musharixii ku guuleysta jagada madaxweynaha waxaan u soo jeedinaa in uu dalka daacad ugu shaqeeyo oo uu taarikhda baal dahab ah ka galo, jiilka soo socdana u reebo dhaxal wanaagsan.
Maxamed Xasan Nuux oo mar kale ku soo baxay doorasho mugdi ku jira
Doorashada Kursigii Hirshabeelle ee horay loo laalay oo maanta ka dhaceysa Muqdisho